Previous Article Ọba Akwụkwọ Anambra Na Momodu Achịkọbarala Ụmụakwụkwọ Asọmpi Sụpèéré M
Next Article Obianọ Ekwela Nkwà Ịkwàlitekwu Usoro Mmụta Ọgbara Ọhụụ
Anyị ga-echeta n'ụbọchị iri na ise nke ọnwa Nọvemba, ụlọọrụ ahụ chụrụ ndị ọrụ dị iri asaa maka asambodo adigboroja n'ọrụ.
Ndị isi ụlọọrụ NECO bụ ndị binyere aka n'ọchụchụ ahụ, dịka ha nwetachara ụsa sitere na kọmitii nhazi mere nnyocha maka asambodo na ha ji asambodo adigboroja were bata n'ọrụ ahụ.
Nkea ka ha mere site n'ịgba ndị ọrụ niile nkea metụtara ajụjụ ọnụ. Kọmitii ahụ gakwara n'ihu were degaara mahadum ndị ahụ siri nweta asambodo ahụ, iji were chọpụta ma ha agara ụlọ akwụkwọ ahụ n'ezie. Ọ bụ nkea chịpụtara ọtụtụ ndị ọrụ ahụ a chụrụla ụkwụ n'iru mere kporokpoto jiri were gbaa n'ihu ehi.
Onye okwu okwu ụlọọrụ ahụ gaziri n'ihu were kwuo na nnyocha ahụ ka na a ga-n'iru dịka ọ dị n'okwu ya, "Amụma nnyocha a ka na-aga n'ihu. Oge kọmitii ahụ ga-enye ụsa ha site na nchọpụta ha, a ga-eme ka nkea pụta ìhè dịka o si dị na agba nke mbụ. Amaghị m ihe na-eme ndị ọrụ iri asaa ahụ a chụrụ achụ mana e kwenyere m n'ọchụchụ ahụ bụ ezigbo ntaramahụhụ."
"N'ịga n'ihu, nchọpụta nke agba ndị ọzọ maka nnyocha ahụ ga-apụta ìhè mana agaghị m ekwu oge ọ ga-abụ."